डीसी क्षेत्रमा अधिकारले टिपीएस(अस्थायी सुरक्षित दर्जा)कार्यक्रम जनवरी १९ मा गर्ने ,सम्पूर्ण तयारी पूरा - Enepalese.com
बिहीबार, भदौ ५ २०७६
डीसी क्षेत्रमा अधिकारले टिपीएस(अस्थायी सुरक्षित दर्जा)कार्यक्रम जनवरी १९ मा गर्ने ,सम्पूर्ण तयारी पूरा
विजय थापा २०७५ माघ ४ गते १:३१ मा प्रकाशित
डीसी महानगर क्षेत्रमा अधिकारले टिपीएस(अस्थायी सुरक्षित दर्जा) सम्बन्धि कार्यक्रम आगामी जनवरी १९ तारिख शनिबार गर्ने बारेमा सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको छ । कार्यकम बिहान ११:३० देखि १:०० बजे सम्म हुने छ ।
नेपाली समुदायको हितको लागि बिशेष अस्थायी सुरक्षित दर्जा उपयोग गरि रहेकालाई मध्ये नजर गर्दै यो कार्यकम डीसी क्षेत्रमा दोश्रो पटक गरिदै छ ।
कार्यक्रममा डीसी क्षेत्रकि अधिवक्ता बन्दिता शर्मा दाहाल तथा नेसनल टिपीएस एलाइन्सका एक प्रतिनिधि उक्त आउने भएका छन् ।
स्मरण रहोस ,आगामी फेब्रुअरी १० -१३ सम्म वाशिंगटन डीसी स्थित संसद भवन क्यापिटल हिलमा टिपीएस(अस्थायी सुरक्षित दर्जा) सम्बन्धि कंग्रेसलाई दवाव दिने तथा हाम्रो आवाज उनीहरु संग पुगोस भन्ने हेतुले अन्य बिशेष कार्यक्रमहरु सहित नेसनल टिपीएस एलाइन्स संग अधिकारले सहकार्य गर्ने छ ।
फेब्रुअरी १२ तारिखमा सबै संग मिल्येर र्याली( जुलुस ) प्रदर्शन हुने हुनाले यसै बिषयमा नेसनल टिपीएस एलाइन्सका एक प्रतिनिधिले यस बिषयमा थप जानकारी दिने छन् । आगामी जुन २४ ,२०१९ देखि अस्थाई सुरक्षित दर्जा(टीपीएस)को अवधि समाप्त हुदैछ । कार्यक्रम डीसी महानगर क्षेत्रको भर्जिनियाको आर्लिंगटन स्थित आर्लिंगटनको केन्द्रिय पुस्तकालयमा हुने छ ।
टिपीएस(अस्थाई सुरक्षित दर्जा) का विकल्पहरु के के हुन् सक्छन ? यस्का लागि स्थायी समाधान कसरी गर्न सकिन्छ । यस्तै बिषय लगायत अन्य जिज्ञाशाहरु समेतलाई समेट्ने र जानकारी दिने उद्धेस्यले आयोजना गरिएको हो ।
टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टिपीएस) सम्बन्धि कुनै पनि जिज्ञाशा रहेमा उपस्थिति हुन् डिसी महानगर क्षेत्रका नेपाली समुदायलाई अनुरोध गरिएको छ । प्रवेश शुल्क नि:शुल्क रहने छ ।
NASeA को सबल नेतृत्व र संस्थागत बिकासका लागि (२०१९-२०२१) अध्यक्ष पदमा डा. ठाकुर कार्कीको उमेदवारी
अमेरिकी जनगणना २०२० को लागि न्युयोर्कमा नेपाली समुदायलाई परिचालन गर्न श्रीमती सानुमाया तामाङको संयोजकत्वमा एक समिति गठन ।
प्रतिभाशाली बालिका प्रज्नाको मार्मिक गीत ” फर्कि आऊ ” सार्वजनिक
न्यूयाेर्कमा पहिलो पटक ऐतिहासिक गाईजात्रा कार्यक्रम सम्पन्न